Matongerwo eNyika, 01 Kukadzi 2017
Vachitaura pagungano rekupemberera kugadzwa kwaVaTrump semutungamiriri wenyika raitwa muHarare neChitatu, VaThomas vati masimba agara achitambidzwana murunyararo munyika yavo uye vanodawo kuti Zimbabwe itevedzere gwara iri.
Mapurisa muHarare Anosunga Pastor Mawarire
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vabvuma kuti Pastor Mawarire vasungwa.
Vanhukadzi Havasi Kuita Basa Ravo Zvinoratisirwa Muparamende?
Chipangamazano chesangano reResearch And Advocacy Unit, VaLloyd Pswarayi, vati ongororo iyi yakaitwa vachibvunzurudza vamwe vamiriri vechidzimai pamusoro pezvimhingamupinyi zvavanosangana nazvo mubasa ravo rekuve vamiriri vevanhu.
Voice of America Inosvitsa Makore Makumi Manomwe neShanu
Nhepfenyuro ye Voice Of America nhasi yasvitsa makore makumi manomwe nemashanu ichitepfenyura. Mukuru wenhepfenyuro iyi, Amai Amanda Bennett, vanoti nhepfenyuro iyi iri kuramba ichisimba mumabasa airi kuita uye inotepfenyura nemarudzi makumi mana neshanu pawayaresi neterevhizheni.
ZEC Yokurudzirwa Kutanga Kudzidzisa Vanhu Kunyoresa Kuvhota Patsva
Sangano reElection Resource Centre riri kukurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ichitanga kudzidzisa vanhu nezvekunyoresa kuti vavhote.
Vamwe Vokurudzira Mubatanidzwa weMapato, Kwete Kuwanda kweMapato
Vana veChikoro Votaura Zvido Zvavo
Vana vechikoro mudunhu reMashonaland West vanoti hurumende inofanirwa kuvaka zvikoro zvakawanda munyika sezvo kudzidzira panze zvavari kuita kusinga kurudzire kudzidza kwakanaka.
Kuderera kweHuwandu hweZvinhu Zviri Kutengeswa Kunze Koomesera Nyika
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dzinoti mugore rino ra2017 hurumende inofanira kusunga dzisimbe kuti hupfumi hwenyika hubude mumadhaka mahuri.
Econet Inoti Iri Kuomeserwa muZimbabwe
Kambani yeEconet inoti yakabvisiswa mari yerezenisi kamwe chete asi mamwe makambani achinzi abhadhare pashoma nepashoma.
Musangano weAfrican Union Unotanga kuEthiopia
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vari kumusangano weAfrican Union uri kuitirwa kuAddis Ababa, Ethiopia. Mubatanidzwa uyu wasarudza gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muChad, VaMoussa Faki Mahamat, kuti vatungamire mubatanidzwa uyu sasachigaro kana kuti AU Commission chair.